Mogadishu Journal » Arday ku dhimatay dugsi ay ku wax ku baranayeen magaalada Nairobi
Mjournal :-Inku dhow toban carruur ah ayaa ku dhimatay konton kalana waxaa ka soo gaaray dhaawacyo markii uu ku soo dumay mid kamid ah qolalka ay ardeyda wax ku bartaan, Iskuul ku yaalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Taliyaha booliska Nairobi George Sed iyo xildhibaan laga soo doorto deegaanka ayaa xaqiijiiyay dhimashada carruurta wax ka dhiganeysay Iskuulka Precious Talent School.
Dhismaha waxaa uu ka sameysnaa alwaax iyo Jiingad, wuxuu shilka dhacay subaxnimadii saaka.
Maamulha Iskuulka, Moses Wainaina ayaa telefishinka Citizen uu sheegay in burburka ku yimid fasalka loo aaneynayaa dhismo ku socday bulaacad halkaas marto.
Carruurta wax ka dhiganeysay Iskuulka ayaa u cararay degmada Dagoretti ee galbeedka magaalada Nairobi markii uu shilka dhacay.
Waxaa goobta gaaray qaar kamid ah mas’uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee Kenya.